Coronavirus oo si weyn ugu fiday Baydhabo iyo agabkii COVID-19... | Universal Somali TV
Coronavirus oo si weyn ugu fiday Baydhabo iyo agabkii COVID-19 oo la musuq maasuqay
Wararka ka imaanaya Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay ayaa sheegaya in si weyn uu ugu faafayo xanuunsidaha COVID-19, ee uu keeno Coronavirus, iyadoo dhanka kalana ay isa soo tarayan dadka maalinta kasta xanuunkaasi ugu dhimanaya magaaladaasi.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya in magaalada laga dareemay saamaynta uu ku sheegay xanuunka dilaaga ah ee COVID-19, ka dib markii ay soo kordheen dadka lagu arkayo astaamaha lagu garto xanuunkaasi.
Saxafiyiinta Magaalada Baydhabo ayaa soo warinaya in saddex meelood oo meel dadka Baydhabo ay isu arkayn calaamadaha lagu aqoonsado xanuunka ugu nugul dunida ee la'is qaad-siiyo.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in ay kordheen meydadka lagu aaso xabaalaha ku yaala darafyada Magaalada Baydhabo, iyadoona dadkaasi la rumeysan yihiin inay intooda badan u dhimanayan xanuunkan.
Ilo wareedyadan ayaa xaqiijinaya in dadka la ildaran xanuunka ay kaalmaati ahaan u qaataan dawooyinka xanuun baabi'iyaasha iyo weliba dawada xanuunka malaariyada, haddii la musuq maasuqay dawadii iyo agabkii caafimaad ee bulshadaasi loogu talagalay.
Waxaa xusid mudan in agabkii ay Dowladda Federaalka u qorsheysay in ay dadka reer Koonfur Galbeed kaga hortaggaan xanuunka COVID-19 lagu iibiyo Suuqa Magaalada Baydhabo, sida gacmo gashiga, afuufka afka iyo sanka lagu xirto.
Sidoo kale dawooyin kaalmaati ah oo ay Dowladda Federaalka ku wareejisay Maamulka Koonfur Galbeed, looguna talagalay in dadka uu xanuunka soo rito lagula tacaalo ayaa si aan qarsoodi lahayn loogu iibiya rugaha caafimaadka ee magaalada ku yaala, sida Farmashiyaasha. Dawooyinkan ayaa waxaa gargaar ahaan dalka u keenay Dowladaha Turkiga, Qatar iyo Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO).
Mushkiladda ayaa waxay ka timid inaanan agabka iyo dawada kaalmaatiga ahba lagu wareejin Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed, taasi bedelkeedana loo gacan-geliyay Madaxtooyada Koonfur Galbeed, waana midda abuurtay in la musuq maasuqo.
Markii ay dadka deegaanka arkayn sida aanu maamulku diyaarba ugu ahayn wax ka qabashada COVID-19 ayay u jiheysteen inaanay tagin goobta dadka looga baaro xanuunka, iyagoona door-biday inay xanuunka qarsadaan, si iskooduna isugu karantiilaan guryahooda.
Waxaa intaasi dheer in lacagtii min halka milyan ahayd, ee ay Xukuumadda Ra'iisal Wasaare Xasan Cali Khayre ugu deeqday Maamul Goboleedyada Dalka ka dhisan iyo kan Gobolka Banaadir la musuq maasuqay qaybtii Koonfur Galbeed, ee ahayd in lagu xakameeyo COVID-19.
Saamaynta Coronavirus kuma koobna shacabka Baydhabo oo qura, oo waxayba saamaynteedu gaartay Masuuliyiin Maamulka Koonfur Galbeed qaarkood. Wasiirka Hawlaha Guud ee Koonfur Galbeed, Axmed Nuur Sheekh Maxamed (Axmed Mashruuc) ayaa iminka la ildaran xanuunka.
Wasiirka oo degan hoyga Isaaq Cali Subag, Wasiirka Amniga Koonfur Galbeed oo ku yaala xaafadda Bardaale ayaa waxaa la soo sheegaya in ay xaaladiisa liidato. Wasiir Mashruuc ayaan si caadi ah naqaska u qaadan karin.
Illaa iyo hadda waxaa xanuunka Magaalada Baydhabo ugu dhintay laba ka mida Xildhibaanada Golaha Wakiilada ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed. Xildhibaanadan ayaa lagu kala magacaabi jiray Yuusuf Cabdinuur Suuri iyo Maxamed Axmed Maxamed (Baafo).
Koonfur Galbeed ayaa noqonaysa maamulkii ugu horeeyay, lana soo wariyo in uu musuq maasuqay qoondadii ay Dowladda Federaalka ugu talagashay in maamulkaasi wax kaga qabto faafitaanka fayriskan.
Kan-xigaWasiirkii Beeraha Puntland oo Coronav...
Kan-horeMagaalooyinka dalka oo maanta laga wa...
55,407,291 unique visits